गुञ्जिँदैनन् ‘चचहुइइ’, बाटिँदैनन् बाबियोका पिङ « Lokpath
२०७६, १६ आश्विन बिहीबार १६:३०
गुञ्जिँदैनन् ‘चचहुइइ’, बाटिँदैनन् बाबियोका पिङ
‘हामीले सिकाएनौं, नयाँ पुस्ताले सिक्न चाहेनन्’
प्रकाशित मिति : २०७६, १६ आश्विन बिहीबार १६:३०
काठमाडौं । हावाले दशैं आयो भनेर सङ्केत गरिसक्यो । वातावरण विस्तारै दशैंको माहोलमा पुलकित हुँदैछ । दशैंको रमझम शुरु भएसँगै गाउँघरमा पिङ हाल्ने कुरा चल्नुपर्ने हो । चलिरहेको छ । तर, पहिलेभन्दा निकै कम । पिङ खेल्ने परम्परा आंशिक रुपमा ओझेलमा पर्दै गएको अनुभव गर्न सकिन्छ । नेपाली समाजमा पिङ र परम्परा अन्तरसम्बन्धित छन् । विशेषतः पहाडी तथा ग्रामीण भेगका मानिसहरुले हरेक महिना वा हरेक वर्ष विशेष अवसरहरुमा ‘मेला’ आयोजना गर्थे । त्यही मेलामा मनोरञ्जनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम थियो ‘पिङ’ । दशैंमा पिङ खेल्ने परम्परा पनि यसै अन्तर्गत नै शुरु भएको हुनसक्छ ।
जे होस् दशैंमा पिङको रौनक नै छुट्टै हुन्छ । पिङ नखेली पनि दशैं मनाइन्छ र ? मनाए पनि त्यसको के अर्थ ? सिधा भाषामा भन्ने हो भने, पिङ र दशैं पयार्य हुन् । दशैंमा गरिने रमाइलोमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका पिङले नै खेलेको हुन्छ ।
दशैंमा पिङ खेल्नैपर्ने परम्परा ठ्याक्कै कहिले, कहाँ र कसरी शुरु भयो भन्न नसकिएतापनि यसको इतिहास निकै लामो छ । जबदेखि दशैँ मनाइयो, पिङ खेल्न पनि उही बेलादेखि नै शुरु गरिएको हो भनेर धेरैले लख काटेका छन् । वर्षमा एकचोटी धर्र्ती छोड्नैपर्ने मान्यताका साथ हरेक वर्ष कम्तीमा एकपटक बालबालिकादेखि युवा, वृद्ध सबैले पिङ खेल्नैपर्ने चलन चलिआएको संस्कृतिविद तथा वाल्मिकी विद्या पीठका प्राचार्य डा.गणेश घिमिरेले बताउनुभयो ।
फ्ल्याश ब्याक टु दशैँ
संस्कृतिविद् डा.घिमिरे आफ्नो युवावस्थाको पिङमोह र दशैँको माहोललाई यसरी सम्झनुहुन्छ, ‘हरेक वर्ष गाउँघरमा दशैँमा पिङ लगाउने चलन थियो । पिङ बनाउन केही समय अघिदेखि नै गाउँका टाठाबाठाहरुको सहभागिता हुने र बाँस, लठारो, काम्रो, काठ आदिको व्यवस्थापन गर्न हरेक घरबाट केही रुपियाँ सङ्कलन गर्ने गरिन्थ्यो । पिङ लगाउने स्थान पनि प्राय ‘फिक्स्ड’ नै हुन्थ्यो ः साझा चौर या मन्दिरको प्राङ्गण । सबैजना मिलेर तयार पारिएको त्यस पिङलाई गाउँकै सम्पदा जत्तिकै महत्त्व दिइन्थ्यो ।
लिङ्गे पिङलाई चार दिशामा बाँस गाढेर, बाबियाबाट निर्मित लठारो प्रयोग गरी तयार गरिन्थ्यो । शिरमा सयपत्री, लालुपाते जस्ता फूलहरु राखेर सिँगारिँदा पिङ चिटिक्क परेकी बेहुलीजस्तै देखिने । बालबालिकादेखि वृद्धसम्म हरेक उमेरका मानिसहरुले पिङ खेल्ने चलन भएतापनि युवा वर्गहरु पिङ खेल्नमा बढी नै उत्साहित हुन्थे । सिङ्गल र डबल दुवै तरिकामा उत्तिकै फिट ।
पिङ खेल्नकै लागि घण्टौंसम्म लाइन बस्ने, तछाडमछाड गर्दै आफ्नो पालो कुर्ने, कसले धेरै उचाइसम्म मच्चिन सक्छ भन्ने होडबाजी । यी सबैको छुट्टै रमाइलो थियो एकादेशको दशैँमा । अहिले समय बदलियो र समयसँगै दशैँ पनि ।’
अहिले दशैंमा बाटिँदैनन् बाबियाको लठारो । गाढिँदैनन् बाँसका खम्बाहरु । पहिला पिङ लगाइने चौर पनि सुनसान देखिन्छ । माहोल मौन छ, लिङ्गो कटाउँदा गुञ्जिने ‘चचहुइया’ गुञ्जिँदैन आजकल । समयले दशैंलाई पनि आफूसँगै फेरिदिएको छ । र, यस परिवर्तनले दशैँको आत्मालाई नै कुल्चिएको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला ।
लिङ्गे पिङ, रोटे पिङ बनाउनलाई खुल्ला ठाउँको आवश्यकता पर्छ । साथै पर्याप्त समयको पनि । तर, न हामीसँग छेलोखेलो जमिन छ न त समय नै । बढ्दो शहरीकरण र आधुनिकताका कारण पिङ बनाउनलाई आवश्यक खाली जमिन र पर्याप्त समयको अभाव भएकाले पनि दशैँमा लिङ्गे पिङ खेल्ने कल्चर मासिँदै गएको हो ।
दशैँलाई सबैसँग घुलमिल भएर मनाउने चाडभन्दा पनि आफ्नो परिवारमा मात्र सिमित राख्ने कल्चरको विकास भएको छ । यसरी दशैँ सामूहिक पर्व भन्दा पनि ‘प्राइभेट सेलिब्रेसन’को माध्यम बनेपछि पिङ खेल्ने चलन लोपान्मुख हुँदै जानु स्वभाविक हो ।
संस्कृतिविद यसो भन्नुहुन्छ
आखिर किन रित्तिए चौर ? किन हराए पिङ ? यही जिज्ञासा हामीले संस्कृतिविद तथा वाल्मिकी विद्या पीठका प्राचार्य डा। गणेश घिमिरेसँग राख्यौं । उहाँले सजिलै उत्तर दिनुभयो ‘प्रविधि, व्यस्तता र संस्कृतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने भावनाको कमी । यी तीन मुख्य कारण हुन् ।’ उहाँका अनुसार अहिलेको पीढि सुखसयलको भोगी छ । संस्कृति, परम्परालाई अवलम्बन गर्नु झन्झटिलो लाग्छ उनीहरुलाई । त्यसैले उनीहरु पिङ खेल्नु भन्दा कोठामै बसेर मोबाइल चलाउन, कम्प्युटरमा गेम खेल्न रमाइलो मान्छन् । ‘आजकल मान्छेलाई टिका लाएर आशीर्वाद थाप्ने फुर्सद त छैन, पिङ खेल्ने त धेरै टाढाको कुरा हो,’ उहाँले थप्नुभयो ।
डा. भन्नुहुन्छ, ‘यो पिडीको मूलमन्त्र हो, बाप बडो न भैया, सबसे बडा रुपैयाँ’ । यद्यपी अहिलेको पिडीलाई नै सबै दोष दिन मिल्दैन । पहिलाको पिडीले बुझाउन सकेन, अहिलेकाले बुझ्न चाहेनन् । कुरा यही हो ।’